शब्दकोश: बाबु, आमा र छोरा
म बसेकै फ्लाटको तीनवटा मध्ये एउटा कोठामा बसे पाका जोडी । जुन कोठा नातिको हो । छोराको घरमा अतिथि जोडी प्रायः गुमसुम नै बस्थे । होहल्ला गरे पिट्छु भनेर घर मालिकले तर्साए जस्तो ! ‘रुम पार्टनर’ नाति पनि हजुरबा र हजुरआमाको प्यारो थियो । जेठा छोराबाट दुई नातिमध्ये जेठो नाति विदेशमा । कान्छा नाति हजुरबा जस्तै कम बोल्ने । कक्षा १२ को विद्यार्थी । कसैको कुभलो नचिताउने बुद्धको चेलो जस्तो । अलिक पथ-परहेजमा बस्ने मान्छेको लागि यो समयमा बुद्धको ट्याग जरुरी नै भइसक्यो । यति ट्याग पनि नभिडाए हामीबीचमा बुद्धको अस्तित्व सुरक्षित-संरक्षित रहोस् पनि त कसरी !
हजुरबा कहिले नातिको कोठामै निरुपाय बसिरहन्थे । झोक्राएर । टोलाएर । कहिले बाहिरको सानो बरन्डामा निस्किएर टुलमा बस्थे, टोलाएरै । यसो टोलमा नजर छर्थे । दृष्टि धेर परसम्म फराकिलो भएर छरिन पाउथेन । सलाइका बट्टा झैं यत्रतत्र छरिएका र अग्ला घरहरुले छेक्थे । बिहान-बेलुकाको खाना-समयमा माथिल्लो तलामा उक्लन्थे । चारा टिपेर तल्लो तलामा ओर्लेपछि फेरि उही रीत । गाउँघरबाट सहरको भौतिक रुपमा फराकिलो र सामाजिक रुपमा ज्यादै साँगुरो ठाउँमा घुस्रिन आइपुग्दाको उकुसमुकुम हजुरआमाभन्दा बढी हजुरबाले झेल्दै थिए । हजुरआमा दोहोर्‍याइरहन्थिन्, ‘म त जसोतसो ब्वारी र ब्वारीसँग यसो दिउँसोपख बियाँलो गर्न आउने छिमेकी केटीहरुसँग गफ गरेर भुलिन्छु, बुवालाई त गाह्रो भइसक्यो याँ दिन काट्न ।’ हजुरबा ‘म त सक्दिनँ बस्न केटी’ भनेर बह पोख्दा रैछन् बुढियासँग । र, पनि बस्नु बाध्यकारी थियो । उता पूर्वको घरमा भएको छोराले पाल्न नसक्ने बताएपछि जेठा छोरासँग बस्न काठमाडौं आइपुगेका थिए । तर, गाउँमा फुक्काफाल बगिरहेको मन काठमाडौंको कचौरामा अँटाउन मानिरहेको थिएन । खायो, बस्यो, सुत्यो । यो रुटिनले पिल्स्याएको थियो दुवैलाई । ‘कतै जानु छैन, केही गर्नु छैन, के लाग्थ्यो भोक !’, गाउँमा केही वर्षअघिसम्म पनि घरधन्दादेखि बारीमा तरकारी फलाउन सक्रिय हुने आमै दिक्किन्थिन् । त्यस्तो दिक्याइले अमिलो बनाइरह्यो ।
हजुरबासँग यसो फुर्सदको बेला बोल्ने गर्थें म । उनको एक्लो र निरीह हालतले चिमोटिएको जो थिएँ । ‘बुवाको बोल्ने साथी पनि कोही हुँदैन’ भन्ने हजुरआमाको खिन्नता मेट्न असफल प्रयास गर्थें । तर, फेरि आफ्नै व्यस्ततामा बेरिएर कहिले कोठामा थुनिएर बस्थें त कहिले सहरतिरै हराउँथें । तैपनि जस दिन्थिन् आमै । ‘यो बाबु यसो बेलाबेला गफ गर्छन् बुवासँग, नत्र बोल्ने साथी नै छैनन्’ भन्थिन् । सहरिया चालचलन बुझेकी आमैको यति कुराले पनि आत्मसन्तोष मिल्थ्यो । खुसी हुन मान्छेलाई पोल्टामा असर्फी नै भरिनुपर्छ भन्ने कहाँ छ र ! कति स-साना कुराको लिकमा दगुर्छ खुसीको रेल । अचम्म !
अफिसबाट मध्य दिनमा म कोठा फर्कंदा दिनहुँ दयनीय भावदशामा देख्थें जोडीलाई । हिन्दी फिल्म ‘बागबान’ को दम्पती अमिताभ बच्चन र हेमा मालिनीको झल्को पाउँथे तिनमा । फरक के थियो भने, फिल्ममा बुढाबुढी छुट्टाछुट्टै बाँडिएर चार छोराको भागमा आलोपालो ‘पाहुना’ बन्ने नियममा बाँधिएका थिए । यता यी जोडी भने सँगसँगै उताबाट खेदिएर यता बस्न आइपुगेका । आफ्नो कोठाको बगलकै कोठा भएकाले साक्षी बनेको थिएँ उनीहरुको मौन पीडा र छटपटीको । उनीहरु केही नबोली कोठामा बसिरहे पनि त्यो मौनता निकै बोझिलो लाग्थ्यो । एक कोठा उकुसमुकुस ! त्यही उकुसमुकुसलाई सुम्सुम्याउँदै उनीहरु राति आठ बज्दा नबज्दै गाउँतिर जस्तै बिछ्यौनामा पल्टिसक्थे । बिहान सखारै उठिसक्थे । सहरले के-के न बित्दो जसरी राति अबेरसम्म न अनिदो बस्न सिकाउन सक्यो, न बिहानसम्म अल्छे बन्न ।
मेरा घरपति अर्थात् यी हजुरबा-आमाका जेठा छोरा पनि मनकारी नै छन् । एउटै घरमा बसे पनि, त्यति भेटघाट र बोलचाल नभए पनि एउटै परिवार जस्तो अनुभूति हुन्छ । भाडामा बस्न थालेको सुरुवाती दिनमा उनले हाम्रो नाता घरभेटी र डेरावाल जस्तो हुँदैन है भन्दै आत्मीयताको झट्टी मजाले हानेकै थिए । मीठो गरी दुखेको थियो त्यो बेला । मनकारी भए पनि उनलाई आफ्नो अधवैंशे उमेरमा वृद्ध उमेरमा पुगिसकेका बुबा र आमासँग मन खोल्न र खुलाउन सहज कहाँ हुँदो हो ! फेरि जागिरको व्यस्तताले समय दिन पनि गाह्रो । एक बिहान र एक साँझको छिपछिपे साथ न हो ! छोरा र बाबु-आमाबीच बोलचाल त हुन्थ्यो, तर खै के-के नपुगे जस्तो । संवाद त थियो तर अलिक शून्य खालको । यसरी वृद्ध बा-आमा ‘घर’मा पनि बेघर, एक्ला र विराना थिए । सानो छँदा ‘बाबा र आमा’ भन्दै ओठै नजिक मुख ल्याएर बोल्न सिकाउने तिनै बा-आमासँग कसरी दूरी बढ्दै जान सक्दो रैछ । पोलिरहन्थ्यो छाती । मेरो यात्रा पनि त्यही दूरीतिरको फड्को त होइन ?
यी हजुरबाको मुहारमा म आफ्ना मावली हजुरबाकै रुप देख्थें । उस्तै भद्र र शालीन । अल्पभाषीको हिसाबले दुवैलाई मितज्यू भने हुने । नाति-नातिना भनेपछि हुरुक्क हुने र तराई घर सर्लाहीमा छँदा गाउँभरिकै लालाबालालाई चिज गरेर खेलाउने मावली हजुरबाले अहिले त मान्छे चिन्नै छाड्नुभएको छ । दोहोरो कुरा गर्न नसक्ने । कुरा गर्दा जवाफमा शिर हल्लाउने र हल्का फुसफुसाहट मात्रै । ९७ वर्षको उमेरमा कसैको सहारा नलिई धन्न ठमठम हिंड्दै हुनुहुन्छ । उहिलेको विशुद्ध आहारविहारको बलले थेगेको ज्यान । उहाँ पनि मूलघर सर्लाही छाडेर काठमाडौं कपनमा कान्छा छोरा-बुहारीसँगै बसिरहनुभएको छ आजकाल । यी हजुरबाको जस्तै भावदशा । घर तीन-चार तलाको सानसहित उभिए पनि त्यही घरभित्रको सीमित उकाली-ओराली भर्‍याङ र भुइँ नै सहरको जिन्दगी हो उनीहरुका लागि ।
नौ छोराछोरीलाई बढाएर, पढाएर बिहेदान गराएर एउटा व्यवस्था गरिदिउन्जेल ती वृद्ध जोडीलाई कुनै सन्तान धेर भएन । अहिले अशक्त अवस्थामा पुग्दा सन्तानको जुलुसमाझ दुई बाबुआमा पनि धेर भए जस्ता हुन पुगे । संसारको चक्र नै यस्तो हुनुपर्ने हो कि, सहज जीवनयापनका लागि आफूले गति लिन नयाँ पुस्ताले यस्तो चक्र बनाएको हो ! बुझ्न चर्को । तैपनि हजुरआमा चाहिं सुनाइरहन्थिन्, कुनै सन्तान र बुहारीहरुबाट समेत आफूहरुलाई नराम्रो छैन भनेर । सबै जाती । उमेर धेरै खाएका, अनुभवले पाकेका मान्छेसँग मन पनि ठूलो हुँदो हो सायद ।
तीन महिना कुन कष्ट र धैर्यले बसे होलान् ती बुढा-बुढी ! यहाँ बस्ने क्रममा विराटनगर गएर माहिला छोराकहाँ बस्ने घरसल्लाह भएछ । दुई साताजति अघि बिदा भए उनीहरु । बसुन्जेल गाउँ फर्किने व्याकुलता पालेर अधमरो भएरै बसे । हजुरबा चाहिं सुरुका दिनमा ज्ञानी भएर दुई तला घरकै संसारमा जकडिए पनि अलिक पछि भने ‘बदमास’ हुन लागे । गाउँघरमा डुलिहिंड्ने, छरछिमेकमा बात मारिहिंड्ने बानी । यहाँ पनि मौका छोपेर कसैलाई नभनी सुइत्त सडकतिर चहार्न निस्कन थाले दिउँसोपख । घरमा बुहारी, नाति र बुढियालाई चाहिं बुढा बाजेलाई तै बाटोमा गाडीले हानिदेला, कता हराउलान् कि भन्ने चिन्ता । बुवाले अलिक होश पाउनुहुन्न भन्थिन् आमै । खोजेर ल्याएर सम्झाए पनि गुम्सिएर बस्न के मान्थे ! कुँजो मान्छेको जिउ र औंला त चटपटाउँछन् । ती हजुरबा त तन्दुरुस्त नै थिए । अरु-अरु दिन पनि लुसुक्क हिंड्ने क्रमले निरन्तरता पाएछ । साँचो अर्थमा जिन्दगी जिउने धुनमा कसैले अवरोध, छेकथुन गरेमा एउटा जीवनधर्मीले कसरी पो मान्दो हो र । ती हजुरबाले पनि जीवन चाख्‍ने क्रममा सानो परिधि तोडेका न हुन् !
मलाई त्यो वृद्ध दम्पतीले मोहनी लगाउँदै गयो । खासमा, म पनि घर-परिवारको लागि केही गर्नुपर्छ भन्ने सोचसहित त्यही घरपरिवारदेखि नै टाढा रहेर कयौं वर्षदेखि यो सहरमा संघर्ष हो कि खै के गर्दै छु । वर्ष, दुई वर्ष, चार वर्ष चिप्लिंदै गए पनि अवस्थामा कुनै फेरबदल देखेको छुइनँ । देखिने प्रगति र अनुभूति गरिने शान्ति दुवै म बाट टाढै छन् अझै । श्रीमद्‌भगवद्‌गीतामा कृष्णमार्फत ‘जे हुन्छ राम्रो हुँदै छ र राम्रो नै हुनेवाला छ’ भन्दै मान्छेले आफ्नो ठान्ने शरीर पनि आफ्नो नभएको सार दिए पनि यत्तिकै बसेर जीवन चल्दैन । अध्यात्मिक वचनमा हिंडेर त्यसको सोझो अर्थमा बग्दा चित्त बुझाउन पनि मुश्किल पर्छ । बेस्कन व्याकुल भएर दौडधुपमा रहन्छ चोला । फलको आश पनि लाग्छ । फलको आश लागिरहने र प्रगति-शान्ति नामका दुलही नभित्रने अवस्था कतिन्जेल रहिरहने हो जीवनमा, हेर्नु छ । गाउँमा बाबु, आमालाई एक्लै छाडेर सहरमा छोरा संघर्षको नाटक रच्न कतिन्जेल सक्छ, जाँच्नु छ । बाबु, आमाले गर्नुपर्ने एउटा कर्तव्य सकिएपछि घुमेर सन्तानले पूरा गर्नुपर्ने कर्तव्यको अर्को पाटो आउँदो रैछ । यो परीक्षा चर्को छ ।
काठमाडौंमा ‘बास’ पाए पनि यहाँ बस्न नसकेर अत्यास मान्दै बुढियासँग विरक्त मान्ने ती हजुरबा बेलाबेला रुँदा पनि रैछन् । घर छाडेर फुंग उडेको साँघुरो सहरमा गुम्सिंदा पिलपिलाउँदा रैछन् । बुढाबुढी झापातिरै बस्ने भन्दै दमकमा एउटा घर बनाइदिन छोराहरुसँग आग्रह गर्दा पनि बन्ने कुनै छाँटकाँट देखिएनछ । घर बनाउने कुरा चंगा बनाए जस्तो सजिलो पनि थिएन । त्यसपछि झन् हरेश खाए होलान् बुढाले । हुन पनि उनको स्वाभाविक जीवनयात्रा सहरमा खुलेन ! हजुरआमा चाहिंले यो बसाइमा एउटा आँखाको मोतीयाविन्दुको शल्यक्रिया गराइन् तिलगंगामा । (उनको ‘ब्वारी’ का अनुसार, पोहोर साल मनकामना मन्दिर लगायतका ठाउँ घुमाउन लैजाँदा ६० हजार रुपैयाँ खर्च भो रे । यसपाली उपचारमा २० हजार ।) अर्को आँखाको शल्यक्रिया ६ महिनापछि गर्ने अनि चश्मा दिन्छु भनेको थियो रे डक्टरले । ६ महिना नआई शल्यक्रिया नै नगराई जीवनसखासँग बाटो लागिन् हजुरआमा । विराटनगरमा अलिक गाउँले परिवेशमा मन त्यसै रमाउँदा शल्यक्रिया गराउने कुराको मेसै नपाउलिन् कि ? बुढेसकालमा तगडा आँखा त के गरी पो देख्थिन् र ! आँखा धमिलो देखे पनि दुवै आँखाको शल्यक्रिया नहुँदा उनले चश्मा लगाउन पाइनन् ।
सद्दे आँखा हुनेले पनि संसार आखिर धमिलै त देख्छन् । किटानीसाथ त के नै भन्न सक्दा हुन् र !
एउटा-एउटा अनुमानको हेराइ । अनुमानकै स्पर्श र मजा-नमजा !
त्यो वृद्ध चखेवा जोडीले जीवनको उत्तरार्द्ध हाँसीखुसी काट्न पाओस् ।
Posted by Jotare Dhaiba at Monday, May 27, 2013
Subhas Lamichhane May 27, 2013
साह्रै मन छुने लेखाइ..आजभोलिको तितो वास्तविकता नै यही हो...बुढाबूढीहरु गाउँको त्यो अथाह फराकिलो,फरासिलो,मनमौजी जीवन छोडेर सहरको यो कोलाहल, उकुसमुकुस र समयहीन वातावरणमा भिजुन् पनि कसरी? त्यैपनि छोराछोरीको मायाले डोर्याएर ल्याइपुर्याउछ, तर महिनादिन पनि टिक्न सक्दैनन्, टिकुन् पनि कसरी?? वृद्ध चखेवाका जोडीहरुलाई जीवन काट्न धौधौ छ!!
Krishna Hari May 28, 2013
मैले त आफै लाई भनेर अध्यन गरे , वास्तबिक हाम्रो आधुनिक समाज भित्र तितो यथार्त
ती चखेवा जोडी को जीवन सुख मय रहोस
rebati raj khadka May 28, 2013
प्रकाश समीर June 03, 2013
साधारण बिषयमा असाधारण लेख। मन पर्‍यो।